Lalàna mampiady hevitra | Hevitra MPANOHARIANA
Lalàna mampiady hevitra
2007-06-23 @ 10:39 in Politika
Raha nitety ireo toerana notokanana tany Ambatomanga sy tao Androva Mahajanga ny filoha Ravalomanana dia nilaza ny amin’ireo lalàna hampiharina (fotoana ho avy no dikan’ny « h ») eto Madagasikara. Lalàna hampiharina roa no azo atao hoe mafonja tamin’izany :
Ny voalohany dia ny amin’ny kara-pamokarana, ny tonga dia nosoratan’ny gazety voalohany moa raha vao notenenina io resaka io dia ny karatra isan-dahy no nitamberina…asa kara-pokonolona angaha no anarany tamin’ny androny ? Maro, hoy ny filoha ny olona midonana-poana, asaina miasa any ambanivohitra tsy mahavita, rehefa asaina manao birao (an-tanandehibe) tsy mahay. Io kara-pamokarana io ihany koa no fitaovana ahafahan’ny mpamokatra (sy ny mpiompy) mahazo fihenam-bidy na laharam-pahamehana amin’ny esaka famokarana. Amin’io fotoana io dia manana avokoa na ny lahy na ny vavy.
Amin’ny ankapobeny dia hevitra tsara hamporisihana ny olona hiasa tokoa ilay kara-pamokarana. Ary manaraka izany dia mahalala ny adidiny handoa hetra mivantana ihany koa izany. Mifamaly amin’izay anefa dia mananjo amin’izay izy hitaky zavatra matotra na tsaratsara kokoa avy amin’ny fitondrana. Eo no olana : misy ny milaza avy hatrany fa tokony ho karazana « symbolique » ilay fandoavana noho ny tsy fahazarana mandoa hetra nefa aleo tsy manao toy izay ny vidin’ny taratasy aza tsy voaverina akory raha manao io kara-pamokarana io ihany. Alohan’ny hanaovana ny zava-drehetra ihany koa dia tsara dinihana ny mety ho fandrika rehetra amin’ny fametrahana ity kara-pamokarana ity.
Ny faharoa kosa indray dia ny amin’ny tsy fahazoana manambady alohan’ny faha-18 taonany na lahy na vavy. Eto Madagasikara anefa dia ny ambaratonga fototra ihany no fianarana tsy maintsy atao. Raha jerena dia ny any ambanivohitra no tena kendrena amin’ity lalàna ity nefa ny any no tena tsy misoratra indrindra ihany koa ny mpivady (raha misy dia misy ny ny 1/3n’ny mpivady ihany no misoratra) . Vokany mety hanosika ny olona tsy hisora-panambadiana indray ny lalàna tian-kampiharina. Ny tanora amin’io fotoana io « tsy misy atao » ka mety hanaonao foana ny olona. Toa vao maika ho be ny zanaka tsy teraka anaty fanambadiana ara-dalàna dia ahoana ny amin’ny kopiam-pahaterahan’ireny zaza ireny ?
Ny mpiady hevitra, ampian’ny dokotera ihany koa dia miteny fa tsy tsara loatra ny vehivavy raha alohan’ny faha-18 taonany no miteraka ka misy ny miteny fa tokony hisy lalàna mametraka ihany koa hoe tsy mahazo miteraka alohan’ny faha-18 taonany ny vehivavy. Ny filoha tsy manaiky ny fanalan-jaza. Dia ahoana ary raha tsy ampy taona ilay hiteraka ? Misy tokoa ny mafana fo loatra fa tsy mandinika tsara amin’ny zavatra rehetra tokony hataony. Voamarika tokoa fa ilana fisainana lalina ny fanaovana ny lalàna fa tsy tokony hanaraka izay baikon’ny ao ambony hatrany. Aiza re no ahitan’ny filoha mpanolotsaina tena matotra sy tsy matahotra azy e ?